मृतक १८ वर्षे सेजलाको मिल्ने साथीले खुलाइन घ’टनाको नया रहस्य, अन्तिम कुराकानी यस्तो भएको थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 22, 2021 AdminLeaveaComment on मृतक १८ वर्षे सेजलाको मिल्ने साथीले खुलाइन घ’टनाको नया रहस्य, अन्तिम कुराकानी यस्तो भएको थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
दमक नगरपालिका–५ स्थित एक घरमा कोठा भाडामा लिएर अध्ययन गर्दै आएकी इलामकी सेजला कोइरालाको बुधबार साँझ रहस्यमय मृ’त्यु भएको छ । प्रहरीले मृ’त्युको कारण बारे अनुसन्धान शुरु भइ सकेको जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीका अनुसार सेजलालाई बेलुकी करिब ५:०० बजे साथीले मोबाइलमा सम्पर्क गरेका थिए ।
त्यस क्रममा मोबाइल नउठे पछि साथी कोठामा पुग्दा उहाँलाई शौचालयको कम्बोर्टमा बे’होस अवस्थामा भेटेको र तत्कालै लाइफलाइन अस्पताल पु¥याइए पनि बचाउन नसकिएको साथीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रनाउ कार्कीले जानकारी दिए । घ’टना लगत्तै पीडितका अभिभावक राति ११:०० बजे दमक आइपुगेका बताइएको छ ।
आफन्तले भने सेजलाको मृ’त्यु रहस्यमयी भएको भन्दै निष्पक्ष छानविन गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । सेजाला बसेको कोठामा पुग्दा ला.गु औ.षध देखि यौ.नजन्य क्रियाकालापको वस्तुहरु यात्रा तत्र छरिएर रहेको भेटिएको छ। सेजलाको आफन्तले उनलाई ब.न्दक बनाएर यस्तो अ.पराध गरेको आ’रोप लगाएका छन । यसै बीच सेजलासँगै बस्ने साथी मिडियामा आएकी छन । उनले सेजलाको बारेमा धेरै कुराहरुको खुलासा गरेकी छन ।
भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस